Chencan GM3012AH5 mejupụtara Board CNC nhazi Center - China Shandong Chenan Machinery
Chencan GM3012AH5 ịmụta Dị akpaka ngwá ọrụ mgbanwe spindle + ise axis n'ibu ịwa nkume, kwụ 360 ogo aka ike adiana n'akuku, bụ nke na-a igwe nwere ike na-arụ ọrụ na panel ihe n'ihu efere, n'akụkụ, gburugburu, ná mkpọda ime ịcha na ịme ọpịpị,-egwe ọka, mkpọpu ala na ọzọ technology.
Ịmụta na kọmputa-aided imewe ka imeta igwe 'kacha bughi imewe. The n'ozuzu ígwè Ọdịdị, sub-modular bed, mgbe ha merela agadi ọgwụgwọ iji kpochapụ esịtidem nchegbu, ogologo oge na-enweghị deformation, mgbe ihe nke ise igwe (3.3 8 m) miri nhazi, iji hụ na mbubreyo nzukọ Ọhụrụ na atọ Axis verticality, iji hụ na nkwụsi ike nke bed Ọdịdị, Ọhụrụ, straightness, ojiji nke okporo ígwè ndọtị usoro kpachie, na ojiji nke dị laser collimator mmezi;
Ọzọ mụ mmiri abụọ girder gantry Ọdịdị, kewara isi na osote abụọ ibé, tinyere isi doo amị spindle, hụrụ agụba, mma Ọbá akwụkwọ, sub-doo agba kọmputa akara usoro na agụụ mmiri. Iji hụ na igwe na Y-axis ruo mita 10 n'okpuru nnukwu ọrịa strok mgbaàmà nnyefe kwụsie ike na nhazi kwụsie ike. Isi na inyeaka ọnụ ụzọ ámá na-welded na oké-walled square nchara, na ike na esịtidem ọgịrịga, na mgbe ahụ doro echesinụ ịka nká ọgwụgwọ iji kpochapụ deformation nchegbu ma melite rigidity;
Ise axis linkage stepless agbanwe n'akuku imewe, nwere ike nweta ọ bụla n'akuku ngwa ngwa linear ọnwụ, maka elu ngwe nke efere ogologo ọnwụ na ejikọta slant ngwa ngwa ọnwụ, nwere ike tinye karịa n'obosara nke 450mm agụba, karịa omimi nke 140mm;
Onwem na aerosol obi jụrụ usoro, dị ka dị iche iche nhazi ihe na-ahọrọ dị iche iche jụrụ ajụ, ike ga-eji maka ọrụ ibe na ịcha ngwaọrụ, hụrụ agụba jụrụ, zere omenala jụrụ mere site efere;
Agụụ adsorption table: n'iji sub-okporo format agụụ adsorption table, nkebi-achịkwa, ihe table tinyere obosara (X axis) direction isetịpụ ụkpụrụ T-oghere, iji ọtụtụ agụụ nfuli, na magburu onwe adsorption ike;
Pneumatic n'ọnọdu tooling: ịtọ X-axis na Y-axis n'ọnọdu cylinder, dabere na njem size of dị iche iche nha;
Pneumatic inwego Rolling Ọdịdị: echichi nke pneumatic n'ibuli n'elu ikpo okwu na table ikwado mejupụtara osisi si n'ihu ma n'azụ nsọtụ nke ihe onwunwe;
9. N'ibu elu-larịị nkenke, elu na-agba na elu rigidity linear ndu rails, magburu onwe ebu ikike n'okpuru elu ibu, mma mgbochi wear Njirimara;
• XYZ arụ ọrụ size: 3000mm * 12000mm * 250mm;
• Cutting Hụrụ: 5 axis bugharia;
• Isiokwu: agụụ & T oghere table;
• Japan YASKAWA servo Motors na ọkwọ ụgbọala;
• Taiwan Syntec akara usoro ezigbo 5 axis ọrụ;
• XY axis: Dị helical ogbe pinion nnyefe;
• Ngwá Ọrụ magazine: gburugburu ụdị ngwá ọrụ magazine na 8 ngwá ọrụ njide;
Ngwa ụlọ ọrụ na ihe onwunwe:
Ụlọ ọrụ: Ọ na-emetụta nnukwu panel mmepụta na nhazi, dị ka di iche iche nke osisi, faiba glaasi, FRP mejupụtara mpempe akwụkwọ, aluminum, ike plastic, acrylic, mkpuchi ihe na ndị ọzọ na nnukwu mpempe akwụkwọ, nke na-chọrọ na refrigerated compartments, mkpuchi compartments, nhazi anyanwụ ụlọ , abanye ụlọ, RV, ubi n'ogige ndị agha, ngwa ngwa ụlọ wdg;
2.Material: nnukwu panel efere bụ a laminate ma ọ bụ kaadị Ọdịdị, n'ime na n'èzí akpụkpọ maka aluminum ma ọ bụ iko ígwè efere, esịtidem lie efere nwere ike ịbụ 6mm igwe anaghị agba ígwè efere, carbon ígwè efere, na dịanyā nwere ike ịbụ polyurethane ụfụfụ, EPS ụfụfụ ma ọ bụ XPS ụfụfụ, iko ma ọ bụ aluminum elu elu na-emekarị mmasị A oyi akwa nke na-echebe film;
Previous: Chencan AT1224AD ATC CNC kpara akwụ Dabere rawụta Center
Osote: SF2040QG-4S- mold processing center
Blue Elephant CNC rawụta
Agwụ Head CNC rawụta
Mmefu ego CNC Machine
Mmefu ego CNC rawụta
Buy CNC rawụta
Zụrụ CNC rawụta Machine
Camping House Ịcha Machine
atụ ihe Machine
Atụ ihe Machine N'ihi Sale
Atụ ihe Machine Price
Atụ ihe rawụta Machine
Cheap CNC igwe Machine
Cheap CNC rawụta
Cheap CNC rawụta 1325
Cheap CNC rawụta N'ihi Sale
Cheap CNC rawụta Machine
China CNC rawụta
China CNC rawụta Machine
China rawụta CNC
Chinese CNC rawụta
CNC 3d atụ ihe
CNC 3d rawụta Machine
CNC acryli Cutting Machine
CNC atụ ihe
CNC n'ilu ọlu Machine
CNC n'ilu ọlu Machine N'ihi Sale
CNC n'ilu ọlu Machine Manufacturers
CNC n'ilu ọlu Machine Price
CNC kọmputa rawụta
CNC cutter N'ihi Sale
CNC ire ọkụ Cutting Machine
CNC ụfụfụ Cutting Machine
CNC ụfụfụ rawụta
CNC ụfụfụ rawụta N'ihi Sale
CNC egweri Machine
CNC Intellicarve n'ilu ọlu Machine
CNC Knife Ịcha Machine
CNC Machine-arụ ọrụ
CNC akara Machine
CNC Plasma Ịcha Machine
CNC Plasma Ịcha Machine China
CNC rawụta 1325
CNC rawụta 1325 Price
CNC rawụta 1530
CNC rawụta 2030
CNC rawụta 2040
CNC rawụta 3060
CNC rawụta 3d
CNC rawụta 3d atụ ihe
CNC rawụta 4030
CNC rawụta Aluminium
Mejupụtara Board CNC nhazi Center
Ụfụfụ Board Ịcha Machine
Mdf Board Ịcha Machine
Ịkwanyere ụfụfụ Board Ịcha Machine
Chencan M1530A 3 axis CNC rawụta maka Wood Door ...
Chencan S1325B Stone CNC osise rawụta Machi ...